Akanjo nentin-drazana Kambodjiana | Vaovao momba ny dia
Maria Jose Roldan | | Kambodza, kolontsaina, Fitsangatsanganana any Azia
Raha efa nieritreritra ianao mandeha any Kambodza Mety hahaliana anao ny hahafantatra hoe inona ny karazana fitafiana nentin-drazana ampiasain'izy ireo, azonao atao ny te hahafantatra mba hahafahanao mitafy akanjo sahaza azy ary hahafahanao hitovy amin'izy ireo amin'ny resaka akanjo.
Toerana miavaka hitsidihana i Kambôdza, fa izany koa manan-karena amin'ny fomba amam-panao sy ny fomba amam-panao, toy ny akanjo anaovan'ny olom-pireneny isan'andro.
1 Ny akanjon'ny vehivavy sy ny lehilahy ara-dalàna
2 Akanjo sahaza an'i Kambôdza
3 Landy manan-danja any Kambodza
4 Ny teknika hanatanterahana ny akanjo nentim-paharazana dia zava-dehibe
5 Samihafa karazana sampot
6 Ny fehiloha Khmer
7 Lamaody Kambodza
8 Akanjo nentin-drazana Kambôdza
Ny akanjon'ny vehivavy sy ny lehilahy ara-dalàna
Ny ankabeazan'ny fitafiana Kambodziana dia tsy raharaha, ankoatry ny fampiasa amin'ny fandehanana amin'ny hetsika ara-dalàna. Matetika ny lehilahy Kambodziana dia manao akanjo fohy sy T-shirt vita amin'ny landy na landy (manankarena indrindra), mba hitandrovana ny hafanana manoloana ny hafanana mahery.. Akanjo nentim-paharazana no itondran'ny vehivavy T-shirt, ary indraindray ny toetrandro no manjaka amin'ny akanjon'ny olona. Rehefa mafana dia tsy misy tsara noho ny manao akanjo marevaka mba hitazomana anao ho mangatsiaka kokoa.
Akanjo sahaza an'i Kambôdza
Maizina matetika ny akanjo, mavesatra kitapo ary asaina manao akanjo landihazo sy lava lava ny olona. Amin'izany no ahafahana miaro amin'ny taratry ny masoandro, fa koa amin'ny moka manelingelina na bibikely hafa. Mandritra ny vanim-potoanan'ny orana dia ilaina ny mitondra elo mandrakariva. Ho fanampin'izay, ilaina ny manao palitao rehefa mankany amin'ny hotely na trano fisakafoanana ianao satria mirona hampiasa be loatra ny aircon.
Ireto toro-hevitra nolazaiko teo amin'ny andalana teo aloha ireto dia hevitra tsara tsy tapaka ao an-tsaina satria hanampy anao hahatsapa ho tsara kokoa ao amin'ny tanànan'ny Kambodza sy afaka manao akanjo mifanaraka amin'ny toetr'andro ianao sy ny fomba fiainanao. Fa mazava ho azy, aza hadinoina ny fahatsapanao aina.
Manaraka izany dia hiresaka aminao momba ny akanjo nentim-paharazana Kambodziana aho, satria ho azy ireo dia zava-dehibe tokoa ny zava-drehetra mifandraika amin'ny lamaody. Ny lamaody dia manampy azy ireo hanavaka ny fiaraha-monina sy hahatsapa ho mahazo aina isan'andro.
Landy manan-danja any Kambodza
Misy landy telo manandanja ao Kambodza. Anisan'izany ireo silka ikat (chong kiet any Khmer), na hol, landy izay misy lamina sy ny karama ikat. Ny vita pirinty dia vita amin'ny kofehy synthetic sy nolokoana. Ny lamina dia averina amin'ny loko isan-karazany, fomba nentim-paharazana loko dimy ampiasaina: mena, mavo, maitso, manga sy mainty. Ny Sampot Hol ampiasaina ho akanjo ambany izy io. Ny Pidan Hol ampiasaina amin'ny fombafomba sy amin'ny tanjona ara-pivavahana izy io.
Ny teknika hanatanterahana ny akanjo nentim-paharazana dia zava-dehibe
Ny sot landy dia manana andraikitra lehibe amin'ny kolotsaina lasa any Kambôdza. Voarakitra an-tsoratra fa manana landy ny mponina ao amin'ny faritanin'i Takéo hatramin'ny andron'ny Funan. Tamin'ny andro taloha dia nianatra fomba sarotra ny vehivavy, ny iray amin'izany ny fomba hol. ATSINANANA Tafiditra amin'ny fandokoana ny volony amin'ny landy. Ny sisa tavela amin'ny fitafiana Kambodziana dia ny teknikan'izy ireo tsy manam-paharoa, ny antony mahatonga azy ireo ho manintona sy tsy manam-paharoa. Nino ny razana fa nanome "endrika" manokana azy ireo izany. Ny sampot dia tandindon'ny firenena any Kambodza. Ny akanjo nentim-paharazana dia mitovy amin'ny an'ny Laos sy Thailandy mpifanila vodirindrina aminy, saingy maromaro ny fiovana natao teo amin'ny firenena.
Samihafa karazana sampot
Ny sampot dia tamin'ny vanim-potoanan'ny Funan, fony ny Mpanjaka Kambodza nibaiko ny vahoaka amin'ny fanjakany mba hampiasa sampot araka ny fangatahan'ny Sinoa. Misy isan-karazany ny sampot, ny tsirairay dia ampiasaina arakaraka ny kilasy sosialy. Ny sampot mahazatra, fantatra amin'ny hoe saron, dia ampiasain'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny kilasy ambany. Mirefy iray metatra sy sasany eo ho eo ny refiny ary mifamatotra amin'ny andilana. Ny sampana Chang Kaen no safidy ankafizin'ny vehivavy antonony, ampiasaina isan'andro. Misy lehilahy manao azy koa, fa miankina amin'ny lahy sy ny vavy ny fanontana.
Ny fehiloha Khmer
Ny scarf Khmer dia scarf vita amin'ny landy na lamba landy (foto-tsakafon'ny lamaody kambodjiana araka ny efa noresahiko tetsy ambony). Ny lamba manify dia mifono manodidina ny loha na ny vozona ary ampiasaina indrindra hanadiovana ny hatsembohan'ny tarehy noho ny loko.
Raha somary nisavoritaka ho anao ny fahazoako ny nolazaiko anao dia aza manahy fa misy tranokala miresaka momba ny lamaody Kambodziana ary ho hitanao tsy ankanavaka ireo akanjo mahazatra sy nentim-paharazana. Amin'ny Internet dia hitanao eo amin'ny ilany ankavanana ny menio misy rohy mba hahitanao ny tsirairay amin'izy ireo. Isaky ny fizarana tsirairay dia ahitanao karazana sary isan-karazany izay mampiseho aminao ny lamaody Kambodjiana, toy ny akanjo antsoina hoe Khmer, akanjo fanaon'ireo vehivavy Kambodziana manao akanjo nentim-paharazana antsoina hoe Khmer izay ampiasaina hanambady na hanatrika fotoam-pivavahana. Azonao atao koa ny manao an'io akanjo io amin'ny fotoana tena manokana. SAINGY ho hitanao ny akanjo sy sary bebe kokoa hahafahanao mahazo hevitra tsara kokoa.
Amin'ity fizarana ity dia te-hampiseho anao horonantsary iray amin'ny Youtube izay ahitanao izany Lamaody nentin-drazana Kambôdza mba ho hitanao tsara kokoa aza hoe manao ahoana izy ireo ary manao ahoana ny fomban'izy ireo. Nahita ilay horonantsary aho tamin'ny alàlan'ny fantsona YouTube Sarong Vit-Kory. Afaka mahita horonan-tsary mahaliana maromaro momba ny fiainana Kambodziana ato amin'ity fantsona ity ianao.
Ahoana ny hevitrao momba ilay horonan-tsary? Mety ho hitanao fa mahaliana izy io, satria tsy mahazatra ny mahita an'io karazana akanjo io eo amin'ny fiaraha-monina misy antsika ankehitriny. Efa zatra karazana lamaody tsy mahazatra, tsy ara-potoana ary mifanaraka amin'ny fiarahamonina misy antsika isika. Saingy tsy midika izany fa tsy mahaliana ny fahalalana kolontsaina vaovao ary ambonin'izany rehetra izany, ny mahafantatra ny fomba fitafian'izy ireo. Ary io dia rehefa fantatrao ny fomba fitafiana toerana, afaka mahazo hevitra momba ny mety ho kolontsain'izy ireo ianao, fahamarinana? Mitovy ve ny hevitrao sa ny fiheveranao azy tsy misy ifandraisany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Kambodza » Akanjo nentin-drazana Kambôdza
Mumbai, Bollywood ary maro hafa